PHOTOS. Cannes 2019: Penélope Cruz, Amber Heard ... relive kukwira kwezvikamu zve 17 May - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU PHOTOS. Cannes 2019: Penélope Cruz, Amber Heard ... relive kukwira kwezvikamu zve 17 mai
Zvechokwadi ndeimwe yemafuta akawanda anotarisirwa iyi 72 edition ye Cannes Film Festival. Pepa raPedro Almodóvar, Pain and Glory, yakaratidzwa kune pepanhau reCannes peChishanu 17 May. Neichi chitsva chemafirimu, Pedro Almodóvar zvakare ari kuedza rombo rake paPalme d'Or, ino nguva ine nhoroondo inenge yeruzhinji. Asi asati aona chimiro chemufananidzo weSpain, nyeredzi dzaiva nerukudzo rwekupukunyuka pamakumbo matsvuku kumativi e-19 maawa, uye taimbova nemabiko nemafuta avo ezuva racho.
Iyo yakakonzerwa nefirimu Urombo neKubwinya zviri pachena kuti yakatanga mhemberero, inooneka ichifadza neyiyi yekutanga yepasi rose. Mutungamiri Pedro Almodóvar akatora iyo pose yakakombwa neboka rake, kusanganisira mutevedzeri weAustria Jessica Hausner pamwe cheteAntonio Banderas, uyo anotamba munhu mukuru, mutambi wemagetsi mudambudziko. Kuuya nomudzimai wake haana kuzengurira kutsvoda, mutambi wacho aive akanaka chaizvo mune suti yakasvibirira baroque prints.
Kurutivi rwavo, Penélope Cruz akazvipawo kumutambo wemifananidzo. Real museum Pedro Almodóvar iyo iri pedyo zvikuru, mutambi wenyika yeSpain akanga achifara chaizvo, akafuka mukunamatira kanel fashion fashion dress. Yakagadzirwa nekorset, jasi rake jena rakakoswa nemaruva ebhuruu rakanga richiwira muhudyu, kufanana nemambokadzi weChiuru uye One Nights.
Kuwedzera kukuru mumisika
Pamusoro peCarnes, isu takaonawo Ambear Heard. Uye kana muiti wemufananidzo aivepo manheru ano paCroisette, hazvisi zvekuda kwake kwouchenjeri hwechinomwe. Kunyange zvazvo iyi 17 inogona kuisa Zuva Rokurwisana neHomophobia, Amber Heard aida kuva kukwira nhanho nemumwe wake Corey Rae, transgender mukadzi uye mutsigiri we LGBTQ chikonzero. Mushure mokuonekwa kwavo pa Golden Globes munaJanuary, ivo vaviri vakatora pose pamwe. Amber Heard akapfekachimiro chimwe chemafudzi eefudzi nemapapiro muwaini yakatsvuka neElie Saab. Uye zvishoma zvatinoda: zvikamu zviviri zvechikwata chechikwama chechikwata chekutarisa kwakanaka.
Bella Hadid anoyevedza kupfuura kare
Uyewo uripo pamatepeti mutsvuku, Bella Hadid akanga amuputira Dior raipfeka mukutengesa zuva rakapfuura nokuda kwekupfeka kwakanaka uye kushingaira ... Iyo-musikana wemakore 22 akapfeka iyo yakareba yakatsvuka slinky jasi raRoberto Cavalli... zvakaoma zvokuti haana kusiya pfungwa dzakawanda pamusoro pechifuva chake. A caliente tarisai akakodzera bomba iye ari. Julianne Moore akaitawo ndima itsva pane chifukidzo chetsvuku cheMutambo, kwechitatu kechipiri kubvira pakatanga. Mushure mekunge Givenchy akapfekedza zuva rakapfuura, mutambi wemabhiza ari kutengesa manheru ano pamusana wakachena, akapfekedzwa nekacheche kape yekate yakaratidza paacavage yake.
Froufrous unoda here, hezvino!
Mushure mokupfeka kwake kwakanaka uye kwakajeka uye kupfeka kwemazuva masikati, Deepika Padukone akavhenekera chigadziko chekundu zvakare ane chimiro chitsva chakanaka. Panguva ino, mutambi wemuIndia wemakore e33 akatengesa pamucheka wakaoma wekugadzira anise, pfupi uye mberi kwenguva refu, akasaina Giambattista Valli. Mutevedzeri wechiThai Min Pechaya akasarudzawo chipfeko chakanaka nemaputi, asi denga rebhuruu, rakasaina Ali Karoui. Pakupedzisira, mumwe mutambi wenyika wekune dzimwe nyika akaisa maonero ake princess dress: Araya Alberta Hargate. Yakagadzirwa kazhinji yakajeka ruffles, nguo yake yakaisvonaka yakagurwa pasi pechifuva chake kuti ibudise pasi pepamuviri mazamu ake. Quia anoti izvozvo chimiro chemuzasi akanga apfuura?
Penélope Cruz / Amber Heard
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/photos-cannes-2019-penelope-cruz-amber-heard-revivez-la-montee-des-marches-du-17-970313
Bharcarès: Vavhuna Voiles, yokudyara-dziva-dziva reMarina, vakapisa usiku, hutachiona hunofungidzirwa